Muran ka taagan kursiga ay ku fadhiso Khadiijo Diiriye | KEYDMEDIA ENGLISH
Muran ka taagan kursiga ay ku fadhiso Khadiijo Diiriye
Waxaa muran ballaaran uu mudooyinkii ugu danbeeyey ka taagnaa kursiga sumadiisu tahay Hop-097 oo ay 20 kii sano ee ugu danbeysay beesha Yaxar ku mataleysay Khadiijo Maxamed Diiriye oo ka mid ah Wasiiradda Xukuumada xil gaarsiinta.
MUQDISHO, Soomaaliya - Cabashada ka imaneysa beesha Yaxar ee ka dhanka ah, Wasriika Gargaarka iyo Maareynta Masoobooyinka khadiija Maxamed Diiriye ayaa kordheysa, waxanna ay tilmamayaan in Khadiijo ay sameysatay, Salaadiin iyo Odayaal iyadu oo qura ay wax u yeeriso, ayna taasi uga gol leedahay ku soo bixida kursiga Aqalka hoose ee tirsigiisu yahay Hop097.
Khadiijo ayaa saladiintii rasmiga ahaa ku tilmaantay, kuwa aan beesha wax meqaam ah ku lahayn, iyadoo shaki galisay in beesha Yaxar ay ka tirsan yihiin, iyaga iyo gabar kursigaasi u tagaan oo dhawaan qurbaha ka timid.
Haweeneyda musharaxa ah ee kursigaasi u hanqal taageyso inay ku fariisato ayaa lagu magacaabaa Baarliin Maxamuud Biin, waxanna ay walaac ka muujisay habka ay khadiijo Maxamed Diiriye dooneyso inay u aduubato kursiga beeshooda, iyadoo xustay inay xigto dhaw yihiin khadiija, oo dhankeeda inkirtay xiriirka ehelnimo ee kala dhaxeeya Baarliin.
Beesha yaxar ayaa sheegaysa in wax qabad rasmi ah aysan ka helin Khadiijo oo muddo dheer reerka ku mataleysay kursigaasi, waxanna ay tilmaamayaan in kursiga ay u aragto mid qeyb ka ah dhaxalkeeda oo aan lagula tartami karin, iyagoo iminka tibaaxaya in ay doonayaan in ay doortaan qof si dhab ah ugu matala Golaha Shacabka.
Tallaabooyinkan ayaa soo de-dejiyey in khadiijo ay adeegsato dhaqaalihii ay ka sameysay kursigaasi, iyadoo qoratay salaadiin iyo odayaal ay afka u buuxisay, waxanna fariimo hanjabaad ah ay telkooda gacanta ugu dirtay odayaashii ka soo horjeestay afduubka ay dooneyso in ay ku sii heysato kursigaasi.
Wararka rasmiga ah ee aan helayno ayaa sheegaya in khadiijo Diiriye ay kulan la qaadatay Madaxeynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe, isla markaana ay ka dalbatay in loo xiro kursigaasi, maadaama uu yaallo Magaalada Jowhar oo ah halka lagu dooranaya kursiga sumadiisu tahay Hop 097 ee beesha Yaxar, waxaase la ogayn go'aanka uu ka qaatay hoggaanka Hirshabelle.